सुनको मूल्य अझै बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्दा यसकारण महँगो पर्छ नेपालमा सुन - Halesi Khabar
सुनको मूल्य अझै बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्दा यसकारण महँगो पर्छ नेपालमा सुन
१२ भाद्र २०७६, बिहीबार १९:३५ ।
पछिल्लो डेढ महीनादेखि निकै उतारचढावकाबीच कारोवार हुँदै आएको सुनको मूल्य स्थानीय बजारमा आज फेरि वृद्धि भएको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्यमा रु ८०० ले वृद्धि भई प्रतितोला रु ७३ हजार ४०० कायम भएको छ । बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला रु ७२ हजार ६०० मा कारोवार भएको थियो । सो मूल्य नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला रु ८०० का दरले बढेको छ । तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७३ हजार १०० कायम भएको छ । यसअघि तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७२ हजार ३०० पुगेकोे थियो । सुनको मूल्य बढेसँगै चाँदीको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ । स्थानीय बजारमा आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु ८९५ पुगेको छ । बुधबार चाँदी प्रतितोला रु ८८० मा खरीद बिक्री भएको थियो ।
गत साउनको शुरुआतदेखि नै सुनको मूल्य तीव्र गतिमा उकालो लाग्न थालेको हो । गत साउन महीनामा सुनको मूल्य प्रतितोला रु सात हजार र चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु ९५ ले वृद्धि भएको थियो । भदौ महीना लागेपछि पनिसुनको मूल्य लगातार बढिरहेकोे छ । साउन १ गते छापावाला सुन प्रतितोला रु ६४ हजार ५००, तेजाबी सुन रु ६४ हजार २०० र चाँदी प्रतितोला रु ७४५ मा कारोवार भएको थियो । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य बढ्नेक्रम रोकिएको छैन । विश्व बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतिऔँस एक हजार ५४२।७५ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो क्रममा रहेको सुनको मूल्यले स्थानीय बजारलाई दबाबमा राखेको हो । अमेरिकी डलरको सटही दर बढेसँगै सुनको मूल्य पनि बढदै आएको छ । चीन–अमेरिका व्यापार टकराव तथा इरान–अमेरिका विवादले पनि सुनको भाउ बढाउन सहयोग गरेको बताइन्छ । सुनको मूल्यमा उतारचढाव देखिएपछि खपत भने ह्वात्तै घटेको छ । दैनिक २०/२५ किलो सुन खपत हुने नेपाली बजारमा पछिल्लो समय बिक्री ह्वात्तै खुम्चिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
ग्लोवल आइएमई बैङ्कको शाखा दिक्तेलमा
खोटेहाङवाट दादुरा–रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सुरु
प्रहरी चौकी यथावत राख्न गृहमन्त्री समक्ष सांसद भट्टराईको माग
दुधकोशी जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुने : उर्जा मन्त्रि पुन
नेकपा जिल्ला नेताको छोरा निशानलाई श्रद्धाञ्जली
खोटाङमा सुन्दरढोका साथी समुह आउने
१. साकेला गाउँपालिकामा योजना सम्झौताको काम ९५ प्रतिशत सकियो
२. ग्लोवल आइएमई बैङ्कको शाखा दिक्तेलमा
३. खोटेहाङवाट दादुरा–रुबेला विरुद्धको खोप अभियान सुरु
४. ‘विकास र समृद्धि’ सरकारको एक मात्र कार्यसूची ः मुख्यमन्त्री राई
५. कम्पोष्ट मल उद्योगको परीक्षण उत्पादन शुरु
६. ‘प्रथम खोटाङ दिक्तेल महोत्सव’को तयारी पूरा, मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गर्नुहुने